Free Thinker: စင်ကာပူတွင် အိမ်ဝယ်ခြင်း အသေးစိတ်
အောက်ပါရေးသားချက်အားလုံးမှာ စင်ကာပူအစိုးရ အင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်သောhttp://www.hdb.gov.sg မှ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သွားရေယိုစရာ စင်ကာပူမှ အိမ်များ
သည်တွင် resale flat ကို ကျွန်တော်က အိမ်ဟောင်း ဟု သုံးပါမည်။ အိမ်ဟောင်းဆိုသည်မှာ အိမ်သစ်မဟုတ်ပါ။ ရှင်းပါမည်။
ယခုမှ ဆောက်ပြီးခါစ အိမ်မှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရှင်မရှိသေး။ HDB က ပိုင်သည်။ အိမ်ဝယ်လိုသူသည် HDB မှ တိုက်ရိုက် ၀ယ်ရသည်။ ထိုအိမ်ကို အိမ်သစ် ဟု ခေါ်၏။ အိမ်သစ်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံသားများသာ ၀ယ်လို့ရသည်။ သူတို့က ပြန်ရောင်း လိုက်သောအိမ်များမှာ resale flat တစ်ပတ်နွမ်းအိမ် သို့မဟုတ် အိမ်ဟောင်း ဖြစ်၏။
ညားခါစ စင်ကာပူနိုင်ငံသား ဇနီးမောင်နှံတို့ အိုးသစ်၊ အိမ်သစ်ထူထောင်ရန် အိမ်ဝယ်တော့မည်ဆိုလျှင် အစိုးရမှ သူတို့ကို ငွေသုံးသောင်း ချီးမြှင့်ပါသည်။ ထို့ပြင် ထို ဇနီးမောင်နှံတို့သည် မိဘများ၏ အနီးအနားတွင် ပြန်ရောင်းသော အိမ်အဟောင်းကို ၀ယ်မည်ဆိုပါက နောက်ထပ် တစ်သောင်းတိုးကာ အစိုးရမှ ငွေ လေးသောင်း ချီးမြှင့်ပါသည်။ ထိုမျှသာမက အခြား ချီးမြှင့် သော ငွေသားများလည်း များစွာရှိသေးရာ အသေးစိတ် မဖော်ပြတော့ပါ။ သို့သော် အိမ်ဝယ်ပြီးလျှင်မူ အနည်းဆုံး ၅ နှစ် မိမိလက်ဝယ်တွင် ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ချက်ခြင်း ပြန်ရောင်းခွင့် မပြုပါ။
စင်ကာပူတွင် အိမ်အသစ်ကို အသက် ၂၁ နှစ်ပြည့်ပြီးသော စင်ကာပူနိုင်ငံသားများကိုသာ ရောင်းချပေးပါသည်။ သို့ အတွက် ထိုအပိုင်းကို ချန်ခဲ့ပြီး SPR များဝယ်နိုင်သော ပြန်ရောင်းအိမ်(Resale Flat) များ အကြောင်းကိုသာ ဖော်ပြပါမည်။
စင်ကာပူသည် လူမျိုးစုများ စုပေါင်းနေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်ငယ်ကလေး ဖြစ်သဖြင့် လူမျိုးစုအဓိကရုဏ်းများ မပေါ်ပေါက် ရလေအောင် အစိုးရမှ အထူးဂရုစိုက် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤသည်ကို Racial Harmony ဟု ခေါ်ပါသည်။ ကျောင်းနေရွယ်ကလေးဘ၀ကတည်းက အားလုံးလူမျိုးမခွဲခြားဘဲ တစ်တန်းတစ်စားထည်း ဆက်ဆံနိုင်တတ်စေရန် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးလိုက်ပါသည်။
အိမ်ခန်းများ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ရာတွင်လည်း ဤ အချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ တစ်နေရာထည်းတွင် လူမျိုးစုတစ်မျိုးတည်း အများကြီး ဖြစ်မနေစေရန် လူမျိုးစုများကို အချိုးချပေးထားပါသည်။ အကယ်၍ တိုက်တစ်ခုတွင် လူမျိုးစု တစ်စုသည် သတ်မှတ်ထားသော အချိုးထက် နည်းတော့မည်ဆိုပါ က ထိုလူမျိုးရောင်းမည့် အိမ်ကို အခြား လူမျိုးမတူသော အိမ်ထောင်စုသို့ ရောင်းပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ မိမိနှင့် လူမျိုးတူကိုသာ ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ အိမ်ရှင်သည် တရုတ်လူမျိုး ဖြစ်ပါက အခြား တရုတ်လူမျိုး တစ်ဦးဦးကိုသာ ရောင်းချနိုင်ပြီး မလေး၊ သို့မဟုတ် အိန္ဒိယ အမျိုးသားများကို မရောင်းချနိုင်ပါ။ ဤသည်ကို Ethnic Group Eligibility ဟု ခေါ်ပါသည်။
မိမိဝယ်မည့်အိမ်သည် မိမိဝယ်လို့ ရနိုင်၊ မရနိုင်ကို http://services2.hdb.gov.sg/ web-site တွင် ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် စင်ကာပူရှိ အိမ်များကို အတန်းအစား သုံးမျိုး ခွဲနိုင်ပါသည်။ မြေစိုက် လုံးချင်းအိမ်၊ ကွန်ဒိုမီနီယမ်
နှင့် အများပြည်သူပိုင်အိမ်(HDB Flat) တို့ ဖြစ်ပါသည်။ (လုံးချင်းအိမ်တွင်လည်း ခြံဝန်း တစ်ခုလျှင် အိမ်တစ်လုံးချင်း
ဆောက်ထားသည့် Bungalow ဘန်ဂလို အိမ်များ၊ ဘန်ဂလိုအိမ်များကဲ့သို့ မဟုတ်သော်လည်း မိမိကိုယ်ပိုင်ခြံ၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်
နှင့် ရှိနေသော အတွဲလိုက် လုံးခြင်းအိမ်များ၊ အတွဲလိုက် ပုံစံတူ ဆောက်ထားပြီး နံရံများဖြင့် ခြားထားသော Terrace ဟု
ခေါ်သည့်အိမ်များ (တစ်ထပ် သို့မဟုတ် နှစ်ထပ် ရှိပါသည်) ဟု ကွဲသွားပါသည်။)
အိမ်ဝယ်ခြင်း အတွက် ပြုလုပ်ရမည့် လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့် (အကျဉ်း)
၁။ မိမိဝယ်မည့် အိမ်ခန်းသည် Ethnic Group Eligibility ဖြစ်ပါသလား။ (အထက်ဖော်ပြပါ website တွင် ၀င်ကြည့်ပါ) ။
၂။ မိမိဝယ်မည့် အိမ်ခန်းတန်ဘိုးသည် မိမိတတ်နိုင်သော ငွေပမာဏ အတွင်း ဖြစ်ပါသလား။
အိမ်ဝယ်ခြင်းသည်ကား တန်ဘိုးကြီးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်ပါသည်။ မိမိလက်ထဲတွင် လက်ရှိ စုမိငွေ မည်မျှ ရှိနေပြီ နည်း။ ဘဏ်မှ မည်မျှ ထပ်ချေးရမည်နည်း။ ဘယ်နှနှစ်ကြာ ပြန်ဆပ်ရမည်နည်း။ တစ်လလျှင် ဘယ်လောက်ဆပ်ရ မည်နည်း။ ဘဏ်တိုးသည် မည်မျှ ဖြစ်သနည်း။ မိမိ၏ လခသည် မိသားစု အသုံးစရိတ်အပြင် အိမ်ခန်းတန်ဘိုး ပြန်ဆပ်ရန် လုံလောက်ပါရဲ့လား။ မိမိ CPF ဖြင့် မလုံလောက်လျှင် ငွေသားထပ်ဖြည့်ရန် လောက်ရဲ့လား။
၃။ စိတ်ကြိုက်အိမ်ခန်းကို ရပြီ။ ဈေးကလည်း မိမိတတ်နိုင်သော ဈေးအတွင်း ဖြစ်သည်။ ဘဏ်သို့ပြန်ဆပ်ရမည့်ငွေ ကလည်း မိမိ လစာနှင့် အဆင်ပြေသည် ဆိုလျှင် လက်ငင်းပေးချေရမည့် ငွေသားပမာဏ ပြည့်အောင် စုရတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ဝယ်သည် ဆိုရာ၌ အိမ်တန်ဘိုးသာမက အိမ်ရှင်သို့ လက်ငင်း ပေးရမည့်ငွေ၊ ပွဲခ၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် စသည့် အခများပါ ထည့်တွက်ရပါမည်။ သို့ဖြစ်ရာ ထိုငွေပမာဏ(upfront costs) ကိုပါ သိရှိထားရန် လိုပါသည်။
၄။ OTP (စရံငွေပေးစာချုပ် မချုပ်ဆိုမီ ဆောင်ရွက်ရန်များ)
အိမ်ရှင်နှင့် စရံငွေပေးစာချုပ် OTP (Option to Purchase) ချုပ်ဆိုပါ။ ထို စရံငွေပေး စာချုပ်ကို အခြေခံ၍ နောက်ပိုင်း “အရောင်းအ၀ယ် စာချုပ်” ချုပ်ဆိုရန် ဖြစ်ပါသည်။ စင်ကာပူတွင် အိမ်ယာမြေ တရားဝင် ပိုင်ဆိုင် ကြောင်း သက်သေထူရန် “စင်ကာပူ မြေယာအာဏာပိုင် အဖွဲ့” (Singapore Land Authority - အတိုကောက် အားဖြင့် SLA - မြန်မာပြည် အခေါ် မြေတိုင်း ဦးစီးဌာန) သို့ လျှောက်ထားရန် လိုပါသည်။ အိမ်ယာမြေ အဆောက် အဦ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်လျှင် SLA က အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်ပြင် ထိုဌာနက ထုတ်ပေးသော “ပိုင်ဆိုင်မှု လက်မှတ်” ကသာ အတည်ဖြစ်လေသည်။ အိမ်ယာဝယ်သူများ အနေနှင့် အခြား ဟိုဟို ဒီဒီ စုံစမ်းစရာမလိုဘဲ SLA မှ ထုတ်ပေးသော “အိမ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု မှတ်တမ်း” ကို လက်ကိုင်ပြုရုံနှင့် လုံလောက်ပါသည်။ အသေးစိတ် သိလိုသူများ အနေနှင့် http://www.sla.gov.sg တွင် ၀င်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၅။ အိမ်ဝယ်ရန် မိမိသည် HDB မှ ငွေချေးလိုပါသလား။ သို့သော် HDB ချေးငွေကို စင်ကာပူ နိုင်ငံသားမှသာ လျှောက်လို့ ရပါသည်။ အကယ်၍ HDB Loan မရလျှင် ဘဏ်ချေးငွေ ရယူရန် ပြင်ဆင်ပါ။ ဘဏ်ချေးငွေများ အကြောင်း အောက်တွင် ဖော်ပြ ထားပါသည်။
၆။ အရောင်းအ၀ယ် သဘောတူညီချက်
စရံငွေပေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးလိုက်ခြင်းသည် ၀ယ်သူအနေနှင့် အရောင်းအ၀ယ် သဘောတူညီချက်ကို တဖက်သတ် လက်ခံလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အစိုးရ ဌာနတစ်ခုခုမှ မကန့်ကွက်လျှင် အရောင်း အ၀ယ် ဖြစ်ပြီ။ ထို အတောအတွင်း ၀ယ်သူ၏ ရှေ့နေမှ “အိမ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု မှတ်တမ်း” ကို ရှာဖွေခြင်း နှင့် ရောင်းချသူ အနေနှင့် လူမွဲစာရင်း ခံထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရလေသည်။ ထို မှတ်တမ်းသည် အလွန်အရေးကြီး၏။ မိမိ ထိုအိမ်ကို ပိုင်ဆိုင် ကြောင်း ပြနိုင်သော တစ်ခုထည်းသော အထောက်အထား ဖြစ်သည်။ အလွန် ရိုသေစွာ သိမ်းထားရမည့် စာရွက်စာတမ်း ဖြစ်ပါသည်။
၇။ ပိုင်ဆိုင်မှု လက်မှတ်ကို စစ်ဆေးခြင်း
စရံငွေပေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် အရေးကြီးသော အဆင့်တစ်ခုမှာ ရောင်းသူ၏ “ပိုင်ဆိုင်မှု လက်မှတ်”
ကို ၀ယ်သူ၏ ရှေ့နေမှ စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ထိုကာလအတွင်း ရောင်းသူအနေနှင့် ၀ယ်သူကို အသိမပေးဘဲ နောက်ထပ် ၀ယ်လိုသူ တစ်ဦးဦးနှင့် ဆက်သွယ်ခွင့် မရှိပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် “ပိုင်ဆိုင်မှု လက်မှတ်” ကို ၀ယ်သူ၏ ရှေ့နေမှ အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စ တရားဝင် ပြီးစီးသည်အထိ လက်ဝယ်သိမ်းထားပြီး ပိုင်ရှင်အသစ် (၀ယ်ယူသူ) အတွက် SLA မှ “ပိုင်ဆိုင်မှု လက်မှတ်” အသစ် ထုတ်ရန် အချိန်ကျမှ အဟောင်းကို ပြန်အပ်လေ့ ရှိပါသည်။
ထို့နောက် Release Application (အိမ်ခန်း လွှဲပြောင်းခြင်း) လျှောက်လွှာ တင်ပါ။
၈။ ရောင်းသူ၊ ၀ယ်သူနှစ်ဦး စလုံးသည် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ယူဆောင်ကာ ပထမရက်ချိန်း (Attend 1st Appointment) အနေနှင့် HDB သို့ သွားရပါမည်။
၉။ ထို့နောက် အိမ်ဝယ်သူသည် မိမိအိမ်အား ဆေးသုတ်ခြင်း စသော လိုအပ်သော ပြင်ဆင်မှုများ အတွက် ကြိုတင် စီစဉ် ရပါသည်။
၁၀။ အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စ တရားဝင်ပြီးစီးခြင်း (Attend Completion Appointment)
အိမ်အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်ရန် ၁ လခွဲမှ ၂ လခန့် ကြာပါသည်။ ရောင်းချသော အိမ်ယာကို မလွှဲအပ်မီ တစ်ပတ်ခန့် အလိုတွင် နှစ်ဖက်ရှေ့နေများမှ အရောင်းအ၀ယ် အထမြောက်ကြောင်း ထွက်ဆိုချက်များကို ရောင်းသူ ၀ယ်သူတို့၏ ဘဏ်များသို့ လွှဲအပ်သည်။ ယင်းထွက်ဆိုချက်များအပေါ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူပါက ယခင် သတ်မှတ်ထားသော အရောင်းအ၀ယ် ပြီးစီးခြင်းရက်ကို ထပ်မံ အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုရက်တွင် အိမ်ရှင်၊ အိမ်ငှား နှစ်ဦးလုံး HDB သွားရသည်။ HDB မှ အိမ်အရောင်း အ၀ယ်စာချုပ်ကို အတည်ပြုပေးပါသည်။
အားလုံးအတည်ဖြစ်သည်နှင့် ၀ယ်သူက ကျန်သောငွေအားလုံးကို အကြေ ချေရပါသည်။ ရောင်းသူ၏ ရှေ့နေက အိမ်သောနှင့် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို ၀ယ်သူ၏ ရှေ့နေသို့ လွှဲအပ်ပါသည်။
ထိုအိမ်ခန်းလွှဲပြောင်းခြင်း စာချုပ်တွင် -
- မြေအမည်၊ တည်နေရာ လိပ်စာ
- ရောင်းသူ အမည်
- ၀ယ်သူ အမည်
- စာချုပ် ချုပ်သည့်နေ့စွဲ
- အိမ်ခန်း လွှဲပြောင်းသည့် နေ့စွဲ
- ရောင်းသူဘက်မှ သက်သေ
- ၀ယ်သူဘက်မှ သက်သေ - စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
ထိုနေ့တွင် ၀ယ်သူ၏ ရှေ့နေသည် Certificate of Title (အိမ်ပိုင်ရှင် အမည်) လျှောက်လွှာတင်ပါသည်။ ထိုနေ့တွင်
ပင် Singapore Land Authority က Certificate of Title ကို ထုတ် ပေးလိုက်ပါလိမ့်မည်။
ထို အခါကျမှပင် အိမ်အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရောက်ပါသတည်း။
၁။ မည်သူများ စင်ကာပူတွင် အိမ်ဝယ်ခွင့်ရှိသနည်း (Eligibility To Buy)
အိမ်ဝယ်ရာတွင် နှစ်မျိုးရှိ၏။ အိမ်အသစ်ဝယ်ခြင်း နှင့် အိမ်ဟောင်းကို ပြန်ဝယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အိမ်သစ်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံသားများသာ ၀ယ်လို့ရသဖြင့် ကျွန်တော်တို့နှင့်မသက်ဆိုင် ဟု ယူဆကာ ဤတွင်မဖော်ပြတော့ပါ။ ယခု ဖော်ပြမည်မှာ အိမ်ဟောင်းကို ပြန်ဝယ်ခြင်း (resale flat) ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ဟောင်းကို ၀ယ်တော့မည်ဆိုလျှင် ပထမဦး ဆုံးလုပ်ရမည်မှာ အသင်သည် ဤအိမ်ကိုဝယ်ရန် အခွင့်ရှိသူဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
၃။ မိသားစုဝင် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
၄။ အထူးအခြေအနေများ (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
အောက်ပါတို့မှာ သူတို့သတ်မှတ်ပေးထားသော အစီအစဉ်များဖြစ်ပါ၏။ မူရင်းအင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဖော်ပြထားပါသည်။
က။ Public Scheme
ဤအစီအစဉ်တွင် သင်သည်အိမ်ဟောင်းကို အောက်ပါသူတို့နှင့်အတူ ၀ယ်ယူနိုင်သည်။
သင်၏ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း နှင့် ကလေး(ရှိလျှင်) သို့မဟုတ်
သင်၏ မိဘနှင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ(ရှိလျှင်) သို့မဟုတ်
(အကယ်၍သင်သည် မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမ၊ တစ်ခုလပ်ဖြစ်ပါက) သင်၏ တရားဝင်ကလေးများ၊ မွေးစားကလေးများ
ခ။ Fiance/Fiancee Scheme
ဤအစီအစဉ်တွင် သင်သည်အိမ်ဟောင်းကို အောက်ပါသူနှင့်အတူ ၀ယ်ယူနိုင်သည်။
ဂ။ Single Singapore Citizen Scheme
ဤအစီအစဉ်တွင် သင်သည်အောက်ပါ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်လျှင် အိမ်ဟောင်းကို ၀ယ်ယူနိုင်သည်။
လူပျို / အပျို သို့မဟုတ်
မုဆိုးဖို / မုဆိုးမ သို့မဟုတ်
ဃ။ Joint Singles Scheme
ဤအစီအစဉ်တွင် သင်သည်အိမ်ဟောင်းကို အောက်ပါသူ တစ်ဦးဦးဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦးသုံးဦးဖြစ်စေ (အများဆုံး ၄ ဦး) ပူးပေါင်းဝယ်ယူနိုင်သည်။
င။ Non Citizen Spouse Scheme
သင်၏ စင်ကာပူနိုင်ငံသားမဟုတ်သော ဇနီး/ခင်ပွန်းသည်
စ။ Non-Citizen Family Scheme
အသင်၏ စင်ကာပူနိုင်ငံသားမဟုတ်သူ အိမ်သားတစ်ဦးဦး (ဥပမာ - မိဘများ)
ဆ။ Orphans Scheme
ဤအစီအစဉ်တွင် သင်(မိဘမဲ့) သည်အိမ်ဟောင်းကို အောက်ပါသူတို့နှင့်ပူးတွဲ ၀ယ်ယူနိုင်သည်။
အသင်၏ အပျို/လူပျို ညီအစ်ကို မောင်နှမများ
ဇ။ Conversion Scheme
ဤအစီအစဉ်တွင် သင်သည်3room သို့မဟုတ် ပို၍ ငယ်သောအိမ်ဟောင်းကို အောက်ပါသူတို့နှင့်ပူးတွဲ ၀ယ်ယူနိုင် သည်။
အကယ်၍ သင်သည် အခြားသူများနှင့်ပူးတွဲကာ အိမ်ဝယ်သည်ဖြစ်အံ့။ (အထက်ပါ ၁၊ ၄။ Joint Singles Scheme ကို ကြည့်ပါ။) ဤအိမ်ကို မည်သို့ခွဲဝေပိုင်ဆိုင်မည်နည်း ဆိုသည်ကို ယခုကတည်းက ပြတ်ပြတ်သားသား သဘောတူထားမှ ဖြစ်ပေမည်။ ဤတွင် အိမ်ကို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ခွင့် ၂ မျိုးရှိသည်။
က။ Joint Tenancy
ဤအမျိုးအစားတွင် ၀ယ်စဉ်က မည်မျှထည့်ဝင်သည်ဖြစ်စေ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်သူအားလုံး ညီတူညီမျှ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အတူဝယ်ထားသူ တစ်ဦးဦးသေဆုံးခဲ့ပါက သူ့ဝေစုကို ကျန်သူများက အလိုလို ပိုင်ပြီးဖြစ်သည်။
ဤအစီအစဉ်တွင် ပိုင်ဆိုင်သူများသည် သူတို့ထည့်ဝင်ထားသလောက် ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော် မည်မျှထည့်ဝင်ထားသည် ဖြစ်စေ၊ အိမ်တွင်မူ အညီအမျှနေကြရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။
သို့သော် တစ်ဦးဦးသေဆုံးခဲ့မည် ဆိုပါက သေဆုံးသူ၏ ဆန္ဒအတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ပေးခွင့်ရှိသည်။ သေဆုံးသူက မည်သည့်ဆန္ဒမျှ မထားရစ်ခဲ့ပါက Intestate Succession Act ဥပဒေအတိုင်း ရပိုင်ခွင့်ကို ခွဲဝေမည်။
အသင်သော်လည်းကောင်း အသင်၏ ဇနီး၊ ခင်ပွန်းသည်သော်လည်းကောင်း စင်ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ်မှ၊ တစ်လလျှင် လခ ၈၀၀၀ ထက်မကျော်ပါမှ ဤချေးငွေကို လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤတွင်ချန်ခဲ့ပါမည်။
၂။ Resale Checklist for Buyers
အဘယ်ကြောင့် ဤ Resale Checklist လုပ်ရသနည်းဟူမူ HDB ၏ မူများ၊ ဘောင်များ၊ အစီအစဉ်များကို အိမ်ဝယ်သူ အနေနှင့် သတိပြုမိစေနိုင်ရန်ဖြစ်၏။ ၀ယ်သူသည် အိမ်ဝယ်ရန် စရံမသတ်မီ ဤ Resale Checklist ကို သေချာစွာဖတ်ရှု လက်မှတ်ထိုးရန် လိုပါသည်။ ဤလက်မှတ်ထိုးထားသော Resale Checklist ၏ scan copy ကို အိမ်ဝယ်လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။ ဤ Resale Checklist ကို ပုံသေမှတ်ထားလို့မရ။ အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေသည်ဖြစ်ရာ မိမိထုတ်လိုက်သော Resale Checklist သည် နောက်ဆုံးထုတ် Resale Checklist ဖြစ်ရန် လိုပေသည်။ Resale Checklist မူရင်းကို First Appointment တွင်တင်ပြရမည်။
Resale Checklist ကို လက်မှတ်ထိုးပြီးမှသာလျှင် နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သော Option To Purchase ကို သွားလို့ ရပါသည်။ Resale Checklist ကို သီးသန့်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤ Resale Checklist မှာ အိမ်ပွဲစားနှင့် ၀ယ်ခြင်းအတွက် နှင့် ပွဲစားမပါဘဲဝယ်ခြင်း ဟု နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ မိမိနှင့် သင့်တော်မည့်ပုံစံကို သုံးရန် ဖြစ်၏။
၃။ Option to Purchase (၀ယ်လိုက ၀ယ်နိုင်ပါသည်)
Option to Purchase ဆိုသည်မှာ မိမိက အိမ်ကိုကြိုက်သဖြင့် စရံသတ်ပြီးသည့်နောက် ဤအိမ်အပြင် အခြား ပိုကောင်းသည့်အိမ်ကို တွေ့လျှင်၊ သို့မဟုတ် ဤအိမ်အပေါ် သဘောမကျသည်များ တွေ့လာလျှင် အိမ်ကို လက်လွှတ်လိုက လွှတ်နိုင်ရန် အခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်၏။ အိမ်ကို ရောင်းသူ/၀ယ်သူနှစ်ဦးစလုံးသည် HDB မှ သတ်မှတ်ပေးထားသော Option to Purchase ပုံစံကိုသာ သုံးရမည်။ ထိုပုံစံအတွင်း တစုံတရာ နှုတ်ပယ်ခြင်း၊ ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်း ကိုခွင့်မပြု။ Option to Purchase တွင် အဓိကပါဝင်သော အချက် နှစ်ချက်ရှိသည်။
၁။ Option Period (ဆိုင်းငံ့ကာလ)
၂။ The Standard Practice (ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း)
၀ယ်သူဘက်မှ ဤအိမ်ကိုဝယ်ရန်သင့်မသင့်၊ အိမ်ရှင်တွင် ပြဿနာ တစုံတရာရှိနေမနေ၊ ဤအိမ်ဝယ်ရန် မိမိတွင် ပိုက်ဆံ အလုံအလောက် ရှိမရှိ။ ဤအိမ်သည် upgrade လုပ်မည့်စာရင်းထဲ ပါနေမနေ၊ upgrade လုပ်လျှင် ဤအခကို မိမိတို့က ကျခံရ မခံရ၊ အခြားသည့်ထက် ပိုကောင်းသည့် အိမ်တွေ့မတွေ့ စသော အကြောင်းအမျိုးမျိုးကို ချင့်ချိန်စဉ်းစားကာ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုလျှင် ရုပ်သိမ်းနိုင်ရန် ကာလတစ်ခု သတ်မှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်၏။ ဤကာလမှာ စနေ၊ တနင်္ဂနွေအပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၁၄ ရက်ဖြစ်သည်။
၂။ Standard Practice
Option Fee, deposit နှင့် Option Period တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။
စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ထက်မများသောငွေကို စရံငွေတင်ရမည်။
စရံငွေ ၁၀၀၀ အပါအ၀င် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ထက်မများသောငွေကို စရံသတ်ရမည်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များအပါအ၀င် option period မှာ option fee ပေးအပြီး ၁၄ ရက်ဖြစ်၏။
ညနေ ၄ နာကို စံသတ်မှတ်ထားသည်။ ဥပမာ -
ရောင်းသူသည် ၀ယ်သူသို့ option ပေးလိုက်သည့်ရက်မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ဖြစ်သည် ဆိုပါက ထို option သက်တမ်းကုန်မည့်အချိန်မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီ ဖြစ်၏။
၃၊ ၁။ Option to Purchase သုံးပြီး ကန်ထရိုက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုကြရာ၌ အောက်ပါအတိုင်း အဆင့် ၇ ဆင့်ရှိ၏။
အဆင့် (၁) Resale Checklist for Sellers
(က) အကယ်၍ ရောင်းမည့်သူသည် ပွဲစား (Agent) မသုံးဘဲ မိမိကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ဆိုပါက Resale Checklist for Sellers who do not engage Salesperson ကို နားလည်အောင် ဖတ်ရှုကာ လိုအပ်သည်များကို ကြိုတင် ပြလုပ်ထားရမည်။ ဘာလုပ်ရမည်ဆိုသည်ကို Resale Checklist for Sellers ထဲတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ အောက်ဖြော်ပပါ
(ခ) အကယ်၍ ရောင်းမည့်သူသည် ပွဲစားကိုအပ်ကာ ရောင်းမည်ဆိုပါက Resale Checklist for Sellers who engage Salesperson ကို နားလည်အောင် ဖတ်ရှုကာ လိုအပ်သည်များကို ကြိုတင် ပြလုပ်ထားရမည်။ ဤပုံစံကိုလည်း အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ပွဲစားနှင့်လုပ်ခြင်းကား အလုပ်ရှုပ်သက်သာပါသည်။ အားလုံး သူ့ဟာသူ လုပ်ပေးသွားလိမ့်မည်။ ဘာလို တယ်ဆိုတာ ပြောပြလိမ့်မည်။ သူပြောသမျှ ကိုယ်က လုပ်ပေးရုံမျှဖြစ်၏။
ဤအဆင့်တွင် ရောင်းသူသည် အိမ်ပြန်ဝယ်ရန် အစီအစဉ်ရှိပါက မိမိရောင်းလိုက်မည့်အိမ်တန်ဘိုးနှင့် နောက်ဝယ်မည့်အိမ် တန်ဘိုးကို ချိန်ဆကာ မိမိတတ်နိုင်သည့် ငွေပမာဏကို ချိန်ဆရန် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၂) Resale Checklist Repository
ရောင်းမည့်သူသည်Resale Checklist ကို Resale Checklist Repository သို့ နောက်တစ်ရက်တွင် တင်ရမည်။ ဤကဲ့သို့ တင်ခြင်းကို online လုပ်၍ ရပါသည်။
(က) ရောင်းမည့်သူသည်Resale Checklist ကိုအားလုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီ ဆိုသည်နှင့် နောက်နေ့တွင် Resale Checklist ၏ Scan copy ကို Resale Checklist Repository သို့ တင်ရမည်။
(ခ) အကယ်၍ နောက်အိမ်ဝယ်ရန် ငွေကြေးစီမံထားပါက အိမ်ရောင်း၊ ၀ယ်ရန်ကြာမြင့်မည့် အချိန် (ခန့်မှန်း) နှင့် ယခုအိမ် ရောင်းပြီး နောက်အိမ်ဝယ်ခြင်းအတွက် တွက်ချက်ထားသော Financial plan ကိုပါ တင်ရပါမည်။
(ဂ) အိမ်ရောင်းဝယ်နေစဉ် first appointment ၌ ရောင်းမည့်သူသည် ထို Resale Checklist မူရင်း နှင့် နောက်အိမ်ဝယ်ရန် တွက်ချက်ထားသော Financial plan တို့ကို Repository သို့ Option to Purchase နှင့်အတူ တွဲတင်ရပါမည်။
(ဃ) Resale Checklist ပေါ်မှ နံပါတ်သည် တစ်ခုသာရှိ၏။ Resale Checklist တစ်စောင်ကို တစ်ကြိမ်သာ သုံးနိုင်သည်။
(င) Soft copy တင်မည့်သူများသည် ဖိုင် size ကို 1.0 MB ထက် မကျော်စေရ။ ဖိုင်အမျိုးအစားများမှာ PDF, JPG, GIF, PNG ဖိုင်များဖြစ်ရမည်။ အကယ်၍ ဖိုင်သည် တစ်ခုထက်ပိုနေပါက စုစုပေါင်း file size သည် 2.0 MB ထက်မပိုရ။
(စ) Resale Checklist ကို Repository တွင် ၆ လ သိမ်းထားမည်။ အကယ်၍ ရောင်းသူသည် ၆လအတွင်း အိမ်ဝယ်သူကို မရှာနိုင်လျှင် နောက်ထပ် Resale Checklist အသစ်ထပ်ဖြည့်ကာ ထပ်တင်ရပါမည်။
(ဆ) အကယ်၍ မူရင်း Resale Checklist ပေါ်မှရက်စွဲသည် scan copy ပေါ်မှ ရက်စွဲနှင့် ကွဲလွဲနေပါက။ သို့မဟုတ် Resale Checklist ပေါ်မှရက်စွဲနှင့် Option to Purchase ပေါ်မှ ရက်စွဲသည် ၇ ရက်အတွင်း ဖြစ်နေပါက အိမ်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိစ္စ ကို ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
အဆင့် (၃) Agreeing on the Resale Price of the Flat
ဤအဆင့်ကား ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူ အိမ်ဈေးကို ညှိကြ၊ သဘောတူကြခြင်း ဖြစ်၏။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ နှစ်ဦး သဘောတူ သတ်မှတ်လိုက်ကြသော အိမ်ဈေးသည် ရောင်းသူဘက်မှရော၊ ၀ယ်သူဘက်မှပါ သဘောတူ ကြည်ဖြူစွာ လက်ခံသည့် ဈေးဖြစ်ရမည် ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
OTP(Option to Purchase) လုပ်သည့်အခါ -
- ရောင်းသူရော၊ ၀ယ်သူပါ အိမ်အရောင်းအ၀ယ်ဈေးအမှန် ကို ကြေငြာရပါမည်။ (ဤတွင် ကြားဖြတ်၍ ပြောလိုသည်မှာ အိမ်အရောင်းအ၀ယ်ဈေး ဆိုရာတွင် အစိုးရလိုင်စင်ရ ရာဖြတ်မှ သတ်မှတ်ပေးသော အိမ်တန်ဘိုး (valuation price) နှင့် အိမ်ပြုပြင်ထားခြင်းအတွက် အိမ်ရှင်မှသပ်သပ် ထပ်တောင်းသောတန်ဘိုး (COV – Cash Over Value) နှစ်ခု ပေါင်းကို ပြောခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - ရာဖြတ်က သတ်မှတ်ပေးသော အိမ်တန်ဘိုးမှာ ဒေါ်လာ ၄ သိန်း ၇ သောင်း ဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်ကတောင်းသော COV မှာ ၃ သောင်းခွဲဖြစ်လျှင် စုစုပေါင်း အိမ်တန်ဘိုးမှာ ၅ သိန်းနှင့် ၅ ထောင် ဖြစ်ပါ မည်။ ရာဖြတ်က ဖြတ်ထားသော အိမ်တန်ဘိုးကို ဈေးဆစ်လို့မရ။ အိမ်ရှင်ကတောင်းသော COV ကိုမူ အိမ်ရှင်နှင့် ဈေးညှိ လို့ရသည်။)
- အိမ်ပွဲစားက အိမ်အရောင်းအ၀ယ်နှင့် ပတ်သက်သမျှ သိသင့်သိထိုက်သည်တို့ကို မချွင်းမချန် မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောပြ ရမည်။
အကယ်၍ ပွဲစားသည် မှန်မှန်ကန်ကန်မပြော။ လိမ်ညာ၍ပြောသည်ဖြစ်အံ့။ Oaths and Declaration Act အရ ဒါဏ်ငွေ သို့မဟုတ် ငွေဒါဏ်+ ၃ နှစ်ထက်မများသော ထောင်ဒါဏ် ချမှတ်ခံရမည်။
ထို့ပြင်တ၀ ရောင်းသူရော၊ ၀ယ်သူပါ ဤ Option to Purchase ပြင်ပမှ အခြား အနှောင်အဖွဲ့ဖြစ်စေမည့် မည်သည့်သဘောတူ ညီမှု၊ သို့မဟုတ် စာချုပ်ကိုမှ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ။
ယခု သဘောတူထားသော အိမ်ဈေးကို ယာယီသဘောတူခြင်းဖြစ်သည်၊ နောက်ပြန်ညှိမည် စသဖြင့်မလုပ်ရ။ ယခုဈေးသည် သာ အိမ်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်မည့် အတည်ဈေးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်အံ့။ Housing & Development Act အရ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ထက်မများသော ဒါဏ်ငွေ (နှင့်/သို့မဟုတ်) ၆ လထက်မများသော ထောင်ဒါဏ် ချမှတ်နိုင်သည်။
အဆင့် (၄) Granting of the Option by the Seller to the Buyer
ရောင်းသူအနေနှင့် ၀ယ်သူအား နှစ်ဦးသဘောတူထားသော ဈေးနှုံးဖြင့် ၀ယ်ယူရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ဤသို့ပေးခြင်းမှာ Resale Checklist လုပ်ပြီး ၇ ရက်နောက်ပိုင်းမှ ဖြစ်၏။
OTP ၏ စာမျက်နှာ (၁) ကို အောက်ပါ အချက်အလက်အမှန်တို့ဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။
၀ယ်ရန်ခွင့်ပြုလိုက်သော ရက်စွဲ (option date) နှင့် အိမ်လိပ်စာ
၀ယ်ခွင့်ပြုကြေး (option fee) ( ၁ ဒေါ်လာမှ အများဆုံး ၁၀၀၀ အတွင်း) (စရံ)
၀ယ်ခွင့်သက်တမ်းကုန်မည့် ရက်စွဲနှင့် အချိန်
ရောင်းသူနှင့် ၀ယ်သူတို့၏ အမည် နှင့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ် (Name and NRIC No.)
၀ယ်သူအားလုံး၏ အမည်များနှင့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များ
ဤအဆင့်တွင် ရောင်းသူနှင့် ပွဲစားကသာ OTP ပေါ်တွင် ဖြည့်စွက်၊ လက်မှတ်ထိုးရမည်ဖြစ်ပြီး ၀ယ်သူအနေနှင့် လက်မှတ်ထိုး ရန် မလိုသေးပါ။ သို့သော် ၀ယ်ခွင့်ပြုကြေး (option fee) (စရံ) ကို ရောင်းသူသို့ ပေးရပါမည်။ ငွေပမာဏကို ရောင်းသူနှင့် ညှိနိုင်၏။ ၁ ဒေါ်လာမှ အများဆုံး ၁၀၀၀ အတွင်းဖြစ်ပါသည်။
၀ယ်သူသည် ရောင်းသူသို့ စပေါ်ပေးပြီးသည်နှင့် ရောင်းသူသည် အခြားတစ်ဦးဦးကို ထပ်မံဝယ်ယူခွင့် မပြုနိုင်တော့ပါ။ OTP သက်တမ်းကုန်သွားမှသာလျှင် အခြားတစ်ဦးကို ၀ယ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
အဆင့် (၅) Resale Checklist for Buyers
အိမ်ဝယ်မည့်သူသည် Resale Checklist ကို ဖတ်ရှုဖြည့်စွက်ရမည်။ ပွဲစားနှင့်မဟုတ်ဘဲ မိမိဘာသာဝယ်မည်ဆိုလျှင် Resale Checklist for Buyers who do not engage Salesperson ကို ဖြည့်ရန်လိုပြီး ပွဲစားနှင့် ၀ယ်ယူမည့်သူများကတော့ Resale Checklist for Buyers who engage Salesperson ကို ဖြည့်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ (အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး။) Resale Checklist ကို အိမ်ဝယ်ခွင့် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
အဆင့် (၆) Option Period
Option Period အိမ်ဝယ်ရန်ခွင့်ပြုထားချိန် သည် OTP ပေါ်တွင် လက်မှတ်ထိုးပြီးသည့်နေ့မှစ၍ တနင်္ဂနွေ၊ ရုံးပိတ်ရက်များ အပါအ၀င် ၁၄ ရက် ဖြစ်၏။ ၁၄ ရက်မြောက်နေ့၏ ညနေ ၄ နာရီတွင် OTP သက်တမ်းကုန်သည်။
၀ယ်သူအနေနှင့် ဤ ၁၄ ရက်ကို ပညာရှိစွာ ကောင်းကောင်းအသုံးချရန်လိုသည်။ ရောင်းသူသည် ထို ၁၄ ရက်အတော အတွင်း မိမိမှလွဲ၍ အခြားဝယ်သူတစ်ဦးနှင့် စကားမဆိုနိုင်။ သို့အတွက် မိမိကဤအတောအတွင်း -
ဤအိမ်ကို မိမိတကယ်ဝယ်ခွင့်ရှိတာ သေချာအောင် လုပ်ရမည်။
ဤအိမ်ဝယ်ရန် တကယ်ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရဲ့လား ဆိုတာ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် တွက်ချက်ရမည်။
ဤအိမ်သည် လက်ရှိပိုင်ရှင်အပြင်၊ အခြားမည်သူနှင့် ခွဲဝေပိုင်ဆိုင်နေသေးသနည်း၊ ဤအိမ်သည် အကြွေးကင်းရဲ့လား။ အခြား ဘာပြဿနာတွေ ရှိနေသေးသနည်း၊ အမွေဆိုင်အိမ်လော စသည့် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို သေသေချာချာ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်လိုပါသည်။ မိမိလက်ထဲရောက်လာမှ ပြဿနာတစ်ပြုံကြီးနှင့်ဆိုလျှင် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်မည်။ ထို့ပြင် လည်း ဤအိမ်ကို မိမိတကယ်ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာလည်း အရေးကြီးပါသည်။ အိမ်ဝယ်ခြင်းဟူသည် ဒါမကြိုက်လို့ ဆိုပြီး ချက်ချင်း ကောက်ကက် ပြောင်းလို့ရတာမဟုတ်သည့်အတွက် ၀ယ်ပြီးမှ ဟိုအိမ်လေးယူလိုက်ရ အကောင်းသားဟု နောင်တ ရမနေဘို့လည်း လိုပါသည်။
အဆင့် (၆က) Exercising the Option to Purchase (if buyers wish to proceed with purchase)
Exercise လုပ်သည်ဆိုခြင်းမှာ စရံငွေ အပြည့်ပေးခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ အသင်သည် ဤအိမ်ကို ၀ယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ ဆိုသည်နှင့် Option Period အတွင်း exercise လုပ်ရပါသည်။ ဤသို့လုပ်ရာတွင် -
- OTP ပေါ်တွင်ပါသည့် acceptance နေရာတွင် လက်မှတ်ထိုးရပါမည်။
- ၅၀၀၀ ထက်မများသော စရံ (option fee အပါအ၀င်) ပေးရပါမည်။
- Option Period အတွင်း ရောင်းသူသို့ OTP ကို ပေးရပါမည်။
အကယ်၍ သင်သည် အိမ်ဝယ်ရန် ဘဏ်မှငွေချေးသည်ဖြစ်လျှင် exercise မလုပ်မီ ဘဏ်မှထုတ်ပေးထားသော ငွေချေးယူခွင့် စာ (Letter of Offer) ရယူထားရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Letter of Offer ပေါ်မှ ရက်စွဲသည် OTP ပေါ်ရှိ acceptance နေရာတွင် လက်မှတ်ထိုးထားသောရက်ထက် စောနေရမည်။ သို့ဖြစ်၍ အိမ်ဝယ်ရန် သေချာပြီဆိုသည်နှင့် ဘဏ်မှငွေချေး သည့်ကိစ္စကို အဆောတလျင် လုပ်ထားရန်လိုပါသည်။
အဆင့် (၆ခ) Letting the Option Expire (if buyers do not wish to proceed with the purchase)
အကယ်၍ ၀ယ်မည့်သူသည် အိမ်ကိုမ၀ယ်လိုတော့ပါက ရောင်းသူရော၊ ၀ယ်သူပါ ဘာမှဆက်လုပ်စရာမလိုတော့ပါ။ Option Period ကုန်သည်အထိ စောင့်နေရန်သာ လိုပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Option Period မှာ ပထမ စကားဆိုစဉ်ကရက်မှ စရေပြီး (တနင်္ဂနွေ၊ ရုံးပိတ်ရက်များအပါအ၀င်) ၁၄ ရက်မြောက်နေ့၏ ညနေ ၄ နာရီတွင် သက်တမ်း ကုန်ပါသည်။
အဆင့် (၇) Finalising on submission of resale application to HDB
ရောင်းသူ၊ ၀ယ်သူနှစ်ဦးလုံးသည် အိမ်ဝယ်လျှောက်လွှာ (resale application) အား HDB သို့ မည်သည့်နေ့၌ တင်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ ၀ယ်သူက exercise လုပ်အပြီး ဘယ်နှရက်အကြာတွင် တင်မလဲ ဆိုတာ ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ Resale Checklist, Option to Purchase စသော ပုံစံများကို သီးသန့်ဖော်ပြထားပါသည်။
၄။ အိမ်ဝယ်ရန်အတွက် ငွေကြေးစီမံချက် (Financial Planning)
အိမ်ဝယ်ခြင်းသည်ကား ကြီးစွာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ ဘဏ်မှငွေချေးပြီးဝယ်ရမည်ဆိုလျှင် နှစ်ရှည်လများ ကြွေးဆပ်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် သေသေချာချာစဉ်းစားပြီး မိမိတတ်နိုင်သည့် ငွေကြေးပမာဏရှိ၊ မရှိ။ မိမိဆပ်နိုင်သော ငွေ အတွင်းမှ ဖြစ်၊ မဖြစ် ဆိုသည်ကို ကျကျနနတွက်ချက်၊ စီမံ၊ ဆုံးဖြတ်ရန် လိုပါသည်။
မိမိမည်မျှ တတ်နိုင်သနည်း ဆိုသည်ကို အောက်ပါအချက်များပေါ်မူတည် တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။
v လက်ငင်းချေရမည့် ငွေပမာဏအတွက် မိမိလက်ထဲတွင် ငွေသားမည်မျှစုမိထားပြီနည်း။
v မိမိ၌ CPF ပိုက်ဆံ မည်မျှ စုမိထားပြီနည်း။
v ဘဏ်မှငွေမည်မျှချေးပြီး လစဉ်မည်သည့်ပမာဏကို မည်မျှကြာကြာ ပြန်ဆပ်ရမည်နည်း။
၄၊ ၁။ လက်ငင်းချေရမည့် ငွေပမာဏအတွက် မိမိလက်ထဲတွင် ငွေသားမည်မျှစုမိထားပြီနည်း။
ငွေသားဖြင့် လက်ငင်းချေရမည့် ပိုက်ဆံများတွင် -
၁။ စရံပေးငွေ - စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀၀ (ဤတွင် option အတွက် ၁၀၀၀၊ exercise အတွက် ၄၀၀၀ ဟု နှစ်ဆင့်ခွဲ ပေးရသည်။)
၂။ အိမ်ဝယ်ရန် ဘဏ်မှငွေချေးမည်ဆိုလျှင် -
အိမ်တန်ဘိုး၏ ၂၀ % ကို ငွေသားဖြင့် လက်ငင်းပေးချေရမည်။ ဤကဲ့သို့ချေရာတွင် မိမိ၌ CPF ပိုက်ဆံအလုံအလောက်ရှိပါက ထိုပမာဏ၏ ၅% ကို ငွေသားဖြင့်သော် လည်းကောင်း ၁၅% ကို CPF ပိုက်ဆံဖြင့်သော် လည်းကောင်း ပေးလို့ရသည်။ အကယ်၍ CPF ဖြင့်ပေးရန် ငွေမလောက်ပါကမူ ငွေသားဖြင့်ထပ်ဖြည့် ပေးရမည်။
အရေးကြီးသော မှတ်ချက်။ ။ ဘဏ်မှ အများဆုံးချေးနိုင်သောငွေမှာ အိမ်တန်ဘိုး (ရာဖြတ်က ဖြတ်ပေးသော အိမ်တန်ဘိုး - valuation price) ၏ ၂၀% ဖြစ်သည်။ မှားတတ်ကြသည်မှာ အိမ်တန်ဘိုးကို valuation price + COV ဟု ထင်တတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကို သေသေချာချာ နားလည်မထားလျှင် ငွေချေးရာတွင် လိုသည်ထက် များစွာ လျော့နည်း သွားတတ်သည်။
၃။ COV (Cash Over Value)
ငွေသားဖြင့်ပေးချေရမည့် ပိုက်ဆံများတွင် COV လည်း ပါသည်။ COV မှာလည်း အိမ်ရှင်ကိုလိုက်၍ အတော်များသည်ဖြစ်ရာ ဤပိုက်ဆံကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားရန်လိုပါသည်။ COV ပမာဏကို အသေမှတ်ထားလို့မရ။ အချိန်၊ အိမ်အနေအထား၊ နေရာ၊ အထပ်အမြင့်၊ စသည်တို့အပေါ်မူတည်ပြီး များစွာကွာနိုင်ပါသည်။ အချို့မှာ တစ်သောင်းလောက်သာ ရှိပြီး အချို့မှာမူ ငါးသောင်းလောက်ထိ တောင်းပါသည်။
၄။ CPF စုငွေ
မိမိ၌ CPF စုငွေမည်မျှရှိသည်ကို CPF website (http://www.cpf.gov.sg) မှ my cpf တွင် ကြည့်လို့ရပါသည်။ CPF စုငွေ သုံးမျိုးရှိသည့်အနက် အိမ်ဝယ်ရာတွင် ပေးချေရန် Ordinary Account မှ ပိုက်ဆံကို သုံးနိုင်ပါသည်။ CPF မည်မျှ သုံးလို့ရမည် ဆိုသည်ကို CPF Housing Withdrawal Limits Calculator တွင်မိမိဘာသာ တွက်ယူနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်မှငွေချေးသူများသည် အိမ်ဝယ်ရန် မိမိ၏ Ordinary Account ၌ ရှိသမျှ ပိုက်ဆံအားလုံးကို သုံးနိုင်ပါသည်။
ပွဲစားခမှာ ပုံသေမရှိပါ။ အမှန်မှာ ၀ယ်သူအနေနှင့် ပွဲခပေးရန် မလိုဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သို့သော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ရောင်းသူမှ ၂ ရာခိုင်နှုံး၊ ၀ယ်သူမှ ၁ ရာခိုင်နှုံး ပွဲခ ပေးရပါသည်။ သို့သော် ပွဲစားများမှာ အလွန်စိတ်ရှည်စွာဖြင့် မိမိလိုချင်သည့် အိမ်ရသည့်တိုင် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသည့်အတွက် ၀ယ်သူများကလည်း သဘောတူကြည်ဖြူစွာ ပေးကြပါသည်။ ၁ ရာခိုင်နှုံး ဆိုသည့်တိုင် ညှိ၍ရပါသေးသည်။
၆။ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် (Stamp Duty)
ပွဲခက သိပ်မများလှပါ။ အများဆုံးပေးရသည်မှာ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ဖြစ်ပါသည်။ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကိုပါ ငွေသားဖြင့်ပေးချေရမည့် ပိုက်ဆံများတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရပါမည်။
တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ အိမ်တန်ဘိုး၏ ပထမ ၁ သိန်း ၈သောင်း အတွက် ၁ ရာခိုင်နှုံး၊ ဒုတိယ ၁ သိန်း ၈ သောင်းအတွက် ၂
ရာခိုင်နှုံး၊ ထိုနှစ်ရပ်ပေါင်း(သုံးသိန်း ခြောက်သောင်း) အထက် အတွက် ၃ ရာခိုင်နှုံး ပေးဆောင်ရပါမည်။
ဥပမာ - အိမ်တန်ဘိုးသည် လေးသိန်း ဖြစ်သည် ဆိုပါစို့။
ပထမ ၁၈၀၀၀၀ အတွက် ၁ ရာခိုင်နှုံး = ၁၈၀၀။ ဒုတိယ ၁၈၀၀၀၀ အတွက် ၂ ရာခိုင်နှုံး = ၃၆၀၀။
တတိယ ကျန်ငွေ ၄၀၀၀၀-(၁၈၀၀၀၀+၁၈၀၀၀၀)= ၄၀၀၀၀ အတွက် ၃ ရာခိုင်နှုံး = ၁၂၀၀။
သို့အတွက် လေးသိန်းတန် အိမ်အတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျသင့်ငွေမှာ ၁၈၀၀+၃၆၀၀+၁၂၀၀=၆၆၀၀ ဖြစ်ပါသည်။
Tax Rate for Mortgage Documents (ဘဏ်မှ ငွေချေးခြင်းအတွက် ပေးဆောင်ရသော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်)
ထိုအခွန်မှာ ပုံသေအားဖြင့် ဘဏ်မှချေးငွေ၏ ၀.၅ ရာခိုင်နှုံး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အများဆုံး S$500.00 သာ ပေးဆောင်ရန် လိုပါသည်။ ဥပမာ -
မိမိသည် အိမ်ဝယ်ရန် ဘဏ်မှ ငွေရှစ်သောင်း ချေးသည်ဆိုပါစို့။ ထို ငွေရှစ်သောင်း အတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ-
S$ 80000 x 0.5 % = S$400.00
သို့သော် မိမိသည် ဘဏ်မှ ငွေ လေးသိန်း ချေးသည် ဖြစ်ပါမူ ထိုအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ S$500.00 သာ ဖြစ်ပါသည်။
၇။ Legal Fees
ထို Legal Fees မှာ အိမ်ဝယ်ခြင်းအတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသော ရှေ့နေခ ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အိမ်တန်ဘိုး၏ ၀.၄ ရာခိုင်နှုံး သို့မဟုတ် အများဆုံး S$ 2500 ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အိမ်တန်ဘိုး အနည်းအများပေါ်လိုက်၍ ပြောင်းနိုင် ပါသည်။ ဥပမာ ဦးဘ သည် ဦးမြ ထံမှ ထောင့်ဆုံးရှိ Terrace အိမ်တစ်လုံးကို စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၂သိန်း ၈ သောင်း ဖြင့် ၀ယ်ယူလိုက်သည် ဆိုပါစို့။ ဦးဘ ပေးဆောင်ရမည့် ရှေ့နေခမှာ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၁၂၀ ဖြစ်ပါသည်။
၄၊ ၂။ ဘဏ်မှငွေချေးခြင်း
ဤနေရာတွင် ငွေချေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကျဉ်းရုံးပြီး သိသင့်သလောက်သာ ဖော်ပြထားပါသည်။ အမှန်တကယ်တွင် ငွေ အမြောက်အများချေးခြင်းအတွက် Terms and Conditions များမှာ အလွန်ရှုပ်ထွေးပါသည်။
HDB loan မရနိုင်သူများ ဘဏ်မှငွေချေးနိုင်သည်။ အိမ်ဝယ်နိုင်ပြီဆိုမှတော့ ပိုက်ဆံအချို့လက်ထဲတွင် ရှိနေ၍ဖြစ်သည်။ သို့အတွက် များသောအားဖြင့် ဘဏ်မှငွေချေးရာတွင် အခက်အခဲမရှိတတ်ပါ။ သို့သော်လည်း သေချာအောင် အိမ်ဝယ်တော့ မည်ဆိုသည်နှင့် ငွေချေးလို့ရနိုင်၊ မရနိုင် ဘဏ်သို့သွားကာ ဦးစွာမေးထားရပါမည်။ အိမ်ဝယ်ရန် အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီးတော့မှ ဘဏ်မှငွေချေးမရလို့ ဆိုလျှင် အလကား အလုပ်ရှုပ်၊ ပိုက်ဆံကုန်တာသာ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မည်။
ဘဏ်ချေးငွေ ပမာဏကို Valuation Limit ပေါ်မူတည် ချေးပါသည်။ ထိုငွေကို LTV (Loan-to-Value) ဟုခေါ်ပြီး LTV သည် Valuation Limit ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုံး ရှိပါသည်။ သို့သော် တစ်ခု သတိထားရမည်မှာ LTV နည်းလျှင် အတိုးနှုန်း နည်းပြီး LTV များလျှင် အတိုးနှုံး များပါသည်။
ဘဏ်တိုးနှုံးများကို Fixed Rate, Variable Rate / Floating Rate, Combination of Fixed and Variable Rate ဟု သုံးမျိုး ခွဲနိုင်ပါသည်။ Fixed Rate ဟူသည်မှာ မိမိ ငွေချေးထားသမျှ ကာလပတ်လုံး အတိုးနှုံးမပြောင်းလဲဘဲ ပုံသေ အတိုးနှုံးသာ ယူ ခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ Variable Rate / Floating Rate ဟူသည်မှာ ပြောင်းလဲနေသော ဘဏ်တိုးနှုံး ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် CPF Board မှ ချပေးသော အတိုးနှုံး အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ Combination of Fixed and Variable Rate ဟူသည်မှာ ငွေချေးသော အစပိုင်း နှစ်များတွင် ပုံသေ အတိုးနှုံးယူပြီး အချိန်ကာလ တစ်ခုတွင် အတိုးကို ပြောင်းယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမျှသာမက ဘဏ်တစ်ခုထဲမှာပင် အတိုးများသော package မှ အတိုးနည်းသော အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းတာမျိုးလည်း ရှိပါသည်။ ၎င်းကို repricing ဟုခေါ်ပါသည်။ ထိုမျှသာမက ဘဏ်တစ်ခုမှ အခြား ပိုပြီး မက်လုံးကောင်းသော ဘဏ်တစ်ခုသို့ လည်း ပြောင်းနိုင်ပါသေးသည်။ ၎င်းကို refinancing ဟု ခေါ်ပြီး ဤကဲ့သို့ပြောင်းခြင်းအတွက် စာချုပ်အသစ်ထပ်ချုပ် ရသဖြင့် ရှေ့နေခ ထပ်မံပေးရပါလိမ့်မည်။
ဘဏ်များတစ်ခုနှင့် တစ်ခု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းခြင်း မတူနိုင်ပါ။ ဤနေရာတွင် UOB HDB Home Loan ကို နမူနာ ထား ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
- UOB မှ အိမ်ဝယ်ရန် ငွေချေးလိုသူသည် အသက် ၂၁ နှစ် မှ ၆၅ နှစ် အတွင်းရှိသူ စင်ကာပူနိုင်ငံသား သို့မဟုတ်
- UOB မှ ငွေချေးလျှင် တစ်နှစ် အခမဲ့ မီးအာမခံရမည်။
- UOB မှ ငွေချေးလျှင် အိမ်ကို မဖြစ်မနေ မီးအာမခံထားရန် လိုပါသည်။
- ချေးငွေ ပြန်ဆပ်ရန် ကာလမှာ ငယ်ရွယ်သူများအဖို့ အနှစ် ၄၀ ဖြစ်ပါ၏။ အသက်ကြီးသူများအဖို့ အသက် ၆၅ ထဲမှ
လက်ရှိ အသက်ကို နှုတ်လိုက်ပါ။ ပြန်ဆပ်ရမည့် နှစ်အရေအတွက် ရ၏။ ဥပမာ သင်သည် အိမ်ဝယ်ရန် ငွေချေး
သည့် အချိန်တွင် အသက် ၄၅ နှစ် ရှိနေပြီ ဆိုပါစို့။ ချေးငွေ ပြန်ဆပ်ရမည့် နှစ်မှာ ၆၅ - ၄၅ = ၂၀ နှစ် ဖြစ်ပါသည်။
- ပြန်ဆပ်ငွေကို မိမိ၏ CPF စုငွေထဲမှ ပြန်ဆပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် အိမ်၏ လက်ကျန် သက်တမ်းမှာ အနှစ် ၆၀
ထက် လျော့နည်းနေလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ မိမိသည် CPF ၀န်ထမ်း ဖြစ်နေလျှင်သော် လည်းကောင်း မရပါ။
အိမ်ဝယ်ရန် ဘဏ်မှ ငွေချေးလိုလျှင် -
- Property Loan Application Form (သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ် website မှ download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။)
- NRIC / Passport မိတ္တူ
- နောက်ဆုံးထုတ် လစာ ဖြတ်ပိုင်း
- နောက်ဆုံးရရှိထားသော IR8A (၀င်ငွေခွန်) ပုံစံ မိတ္တူ
- အလုပ်ရှင်ထံမှ မိမိအား အလုပ်ခန့်ထားကြောင်း စာ
- OTP (Potion-to-Purchase)
- နောက်ဆုံးရရှိထားသော CPF ပြေစာ
UOB ဘဏ်တိုးမှာ Fixed Rate Package နှင့် Floating Rate Package ဟု နှစ်မျိုးရှိရာ -
- Fixed Rate Package အတွက် အတိုးနှုံးမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၃.၉၈ ရာခိုင်နှုံး ပုံသေ ဖြစ်ပါသည်။
- Floating Rate Package အတွက် အတိုးနှုံးမှာ ပထမနှစ်တွင် ၃.၂၅ ရာခိုင်နှုံး၊ ဒုတိယနှစ်တွင် ၃.၅၀ ရာခိုင်နှုံး၊ တတိယနှစ်မှ
နောက်ပိုင်းတွင် ၃.၇၅ ရာခိုင်နှုံး၊ ပထမနှစ်တွင် ၃.၂၅ ရာခိုင်နှုံး၊ ဖြစ်ပါသည်။ (ဤအတိုးနှုံးမှာ ပုံသေမရှိပါ။ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကို လိုက်၍ နှုံးထား အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတတ်ပါသည်။)
နမူနာအားဖြင့် ယခု သင်သည် အသက် ၄၅ နှစ် ရှိပြီး လက်ရှိ ထုတ်နေသော လစာမှာ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ဖြစ်သည် ဆိုပါစို့။ (အကယ်၍ သင့်တွင် အသက်အာမခံ၊ ကားဝယ်ခြင်းအတွက် ပြန်ဆပ်ငွေ စသော ပေးဆပ်စရာ ငွေများ မရှိဘူး ဆိုလျှင်) သင် ပြန်ဆပ်ရမည့် ကာလမှာ အနှစ် ၂၀ ဖြစ်ပြီး အများဆုံးချေးနိုင်သော ငွေမှာ S$352,600 ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်၏ လက်ရှိအသက်သည် ၄၇ နှစ်ဖြစ်ပြီး အိမ်ခန်းဝယ်ရန် ဘဏ်မှ ငွေ ၂ သိန်း ကို Fixed Rate ဖြင့် ချေးထား သည် ဆိုပါစို့။ သင် ချေးငွေ ပြန်ဆပ်ရမည့် ကာလမှာ ၁၈ နှစ် ဖြစ်ပြီး ပထမနှစ်တွင် S$1224, ဒုတိယနှစ်တွင် S$1248, တတိယနှစ်မှ နောက်ပိုင်းတွင် S$1271 ပြန်ဆပ်သွားရမည် ဖြစ်ပါ၏။ အားလုံး တွက်စစ်လိုက်သော် သင်သည် ငွေ ၂ သိန်းချေးခြင်း အတွက် ထို ၁၈ နှစ်အတွင်း အတိုး S$ 73,696 ပေးလိုက်ရပါသည်။
မိမိဘာသာ တွက်ကြည့်လိုသူများ http://www.uob.com.sg/ တွင် ၀င်ရောက် တွက်ချက် နိုင်ပါသည်။
POSB တွင်မတော့ မိမိ မည်မျှ ချေးသနည်း ဆိုသည့်အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ပုံသေအတိုးနှုံး (Fixed Rate) အကြောင်း ဖော်ပြပါမည်။
LTV < 60 %
LTV > 60 % but < 70%
LTV > 70 % but < 80 %
LTV > 80 % but < 85 %
LTV > 85 % but < 90 %
No lock in Package
1 Year Fixed Rate Package
အထက်ပါ ဇယားကို ရှင်းပြပါမည်။
CHR ဟူသည် CPF Housing Rate ဖြစ်၏။ လက်ရှိတွင် CHR နှုံးထားမှာ ၂.၅ ရာခိုင်နှုံး ဖြစ်ပါ၏။ သို့သော် အသေမှတ် မထားပါနှင့်။ အပြောင်းအလဲ ရှိပါသည်။
Lock in Package ဟူသည်ကား မိမိပြန်ဆပ်ရမည့် ကာလ အပိုင်းအခြားကို ကန့်သတ် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - မိမိသည်5Years Lock in Package ဖြင့် ချေးထားပြီး မိမိ ပြန်ဆပ်ရမည့်နှစ်ကို အနှစ် ၂၀ ဟု သတ်မှတ်ထားသည် ဆိုပါစို့။ အကယ်၍ ထီပေါက်သဖြင့်လည်းကောင်း၊ အခြား အကြောင်းတစ်ခုခုဖြင့် သော်လည်းကောင်း မိမိတွင် ငွေများရလာသဖြင့် ငွေချေးပြီး ၄ နှစ် အကြာတွင် ပြန်ဆပ်ရမည့် ငွေအားလုံးကို တစ်လုံးထည်း အကျေဆပ်လိုသည် ဆိုပါစို့။ မိမိသည်5Years Lock in Package ကို ချေးမိလျက်သား ဖြစ်နေသဖြင့် ဘဏ်သို့ လျော်ကြေးငွေသဘော အတိုးတစ်ချို့ပေးရပါလိမ့်မည်။ ဆိုလို သည်မှာ5Years Lock in Package အတွက် ငါးနှစ်အတွင်း မိမိချေးထား သော ငွေအားလုံးကို အကြေဆပ်၍ မရပါ။ ဆပ်လိုလျှင် ငါးနှစ် ကျော်မှသာ လျော်ကြေး တစုံတရာမပေးဘဲ ဆပ်၍ ရပါသည်။ အထက်ပါ ဇယားတွင် No lock in Package ဟု ဖော်ပြထားသည့်အတွက် ကန့်သတ်ချက် မရှိပါ။ မိမိ ဆပ်လိုသည့် အချိန်တွင် ဆပ်၍ ရပါသည်။
Completed ဟူသည်ကား မိမိဝယ်မည့် အိမ်သည် ဆောက်လက်စ တန်းလန်း မဟုတ်ဘဲ လုံးဝ ဆောက်လုပ်ပြီးစီး သဖြင့် အဆင်သင့် တက်နေ၍ရသည့် အိမ်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုပါသည်။
1 Year Fixed Rate Package ဟူသည် မိမိချေးငွေအပေါ် ပထမနှစ်အတွင်း အတိုးနှုံး အပြောင်းအလဲမရှိ။ မိမိ ချေးယူစဉ်က သဘောတူထားသော အတိုးနှုံးအတိုင်း(အပြင်ဈေးကွက်ကြောင့် အတိုးနှုံးများ တက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျသည်ဖြစ်စေ) မပြောင်းလဲ ဘဲ တစ်သမတ်တည်း ယူခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
ထို့အတူ2Year Fixed Rate Package သည် ငွေချေးယူသည့်နှစ်မှ စကာ ပထမ ၂ နှစ်အတွင်း ပုံသေ အတိုးနှုံး၊3Year Fixed Rate Package ငွေချေးယူသည့်နှစ်မှ စကာ ပထမ ၃ နှစ်အတွင်း ပုံသေ အတိုးနှုံး စသဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဤဇယားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ချေးငွေများလျှင် ပေးရသော အတိုးနှုံးများပြီး ချေးငွေနည်းလျှင် ပေးရသော အတိုးနှုံး နည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သို့အတွက် မိမိ အိမ်ဝယ်တော့မည် ဆိုလျှင် အတိုးများများ မပေးရအောင် ပိုက်ဆံ အလုံ အလောက် စုထားသင့်ကြောင်း အကြံပေးလိုက်ရပါသည်။
အိမ်ငှားလိုလျှင် သော်ည်းကောင်း၊ အိမ်အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်လိုလျှင်သော် လည်းကောင်း အိမ်ပွဲစားများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လိုင်စင်ရ ပွဲစားများ (SAEA-Singapore Accredited Estate Agencies) ဖြစ်ပါ၏။ အိမ်အရောင်းအ၀ယ်၊ အိမ်ငှား ကြော်ငြာများ ကို ရှာဖွေလိုလျှင် The Straits Times သတင်းစာ၊ Classified ကဏ္ဍ မှ Properties တွင် ရှာနိုင်ပါသည်။
402 – 542 Residential Properties for Sale (ရောင်းမည့် အိမ်ခန်းများ)
455 – 474 Residential Properties for Rent (ငှားမည့် အိမ်ခန်းများ)
475 – 481 HDB Apartments for Rent (ငှားမည့် HDB အိမ်ခန်းများ) - စသည်ဖြင့် တွေ့နိုင်ပါသည်။
စင်ကာပူသည် လူမျိုးပေါင်းစုံတို့ စုနေသော တိုင်းပြည်ဖြစ်သဖြင့် မိမိအိမ်နီးချင်းမှာ မည်သူ ဖြစ်မည်လဲ မပြောနိုင်။ အကယ်၍ အိန္ဒိယအမျိုးသားများ ဖြစ်မည်ဆိုပါက ၎င်းတို့ဟင်းချက်သောအခါ အရှေ့ခုနစ်အိမ်၊ အနောက် ခုနစ်အိမ် ဟင်းနံ့ကို ရပါလိမ့်မည်။ သူတို့ ငြုပ်သီးများ ကြော်ပြီ ဆိုမှဖြင့် မိမိအိမ်တံခါးကို အလုံသာပိတ်ထားပါ။ မဟုတ်ပါက တစ်အိမ်လုံး ဟပ်ချိုး ဟပ်ချိုး ဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မည်။
စင်ကာပူတွင်တော့ မြန်မာပြည်မှာလို အလှူခံသံ၊ အသံချဲ့စက်ဖြင့် ထီရောင်းသံ စသည့်အသံများကို မကြားရပါ။ မကြာခဏ ကြားကြရသည်မှာ တရုတ်ရိုးရာ ဗုံကြီးများကို အသားကုန်ထုကာ လင်းကွင်းများကို တစ်ချမ်းချမ်းတီးလျှက် လှည့်လာသံ ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ဆုံးထပ်မှာ နေသူတို့အဖို့ တိုက်အောက်ထပ်များတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် မလေး မင်္ဂလာဆောင်မှ ကာရာအိုကေ သီချင်းဆိုသံ၊ အသုဘရှိလျှင် ဘုန်းကြီးများ၏ ရွတ်ဖတ်သံများကို နားဆင်ရပါလိမ့်မည်။
အိမ်ဝယ်ရန် ငွေချေးခြင်းအတွက် ပိုပြီးသိလိုသေးသူများ -
Borrowing Money - Look Before You Leap:
ဤသည်မှာ အိမ်ဝယ်တာတစ်ခုတည်း ရှိသေးသည်။ အိမ်ဝယ်ပြီးနောက် အိမ်ပြောင်းရန်အတွက်၊ ရေမီးလျှောက်ခြင်း၊ Town Council များသို့ S&CC အခွန်များပေးရခြင်း၊ Property Tax ပေးရခြင်း၊ အိမ်အတွက် အာမခံလုပ်ရခြင်း၊ အားပါး - အများကြီး ကျန်ပါသေးသည်။ များပြားလှသော ဤကိစ္စများ ရေးရမှာ အလွန်ပျင်းသွားပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် မိတ်ဆွေများ ရှာဖွေသာ ဖတ်ကြပါတော့ဟု အားနာပါးနာ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
၅ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၂၊ ည ၁၁း၅၀ နာရီ
ဖုံး - 97303027
ဆရာရှင့် .. eligibility to buy house ကို သိပ်မရှင်းလို့ မေးချင်ပါတယ် .. ကျမက Singapore PR တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး၊ Singapore မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Spass Holder တစ်ယောက်ပါ၊ ကျမ အနေနဲ့ရော တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်စေ ၊ ညီအမ တစ်ယောက်ယောက်နှင့်တွဲဖက်ပြီး ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ မိဘ နာမည် နှင့်တွဲဖက်ပြီး ဖြစ်စေ Singapore မှာ အိမ်ဝယ်ခွင့်ရှိ ပါသလားရှင်? ၀ယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်လို အမျိုးအစား အိမ်ကို ၀ယ်ခွင့်ရှိပါသလဲရှင်? နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် အနေ နဲ့ အိမ်ဝယ်ခြင်း အဆင့်ဆင့် ကလည်း .. ယခု ဆရာပြောသွားတဲ့ PR တစ်ယောက် အိမ်ဝယ်ပုံအဆင့်ဆင့် နှင့် အတူတူပါလား? ဖြေပေးပါရှင်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
EP ကတော့ Private Condo ကိုတော့ ၀ယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျား။ S Pass ကိုတော့ သေသေချာချာမသိပါဘူး။ အိမ်ပွဲစားတွေ ဆီမေးကြည့်ရင် ပိုသေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်မေးပြီး ထပ်ဖြေပေးပါ့မယ်။ ပိုက်ဆံချေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘဏ်ကို သွားမေးတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ အိမ်တန်ဘိုးရဲ့ ၈၀ ရာနှုံးလောက်ချေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကိုင်ထားတဲ့ S Pass အခြေအနေ ဘယ်လောက်ခိုင်မာသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး ချေးမှာဖြစ်လို့ ချေးလို့ရမယ်၊ မရဘူးဆိုတာကတော့ ဘဏ်က ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ွRely comment အတွက် ကျးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ ကျမ နားစွန်နားဖျား ကြားဖူးတာက နိုင်ငံခြားသားအနေနဲ့လည်း အိမ်ဝယ်လို့်ရတာမျိုးကို ကြားဖူးထားလို့ပါ။ Far East Organization လို company တွေကလည်း မြန်မာနိုင်ငံထိသွားပြီး Marketing ဆင်းတဲ့ထိရှိနေတာသိရပါတယ်၊ အသေးစိတ်တော့ မသိပါဘူးရှင်၊ ဒါကြောင့် ဗဟုသုတ အနေဖြင့် အကြမ်းဖျင်း ကြိုတင်သိထားချင်တာကြောင့်ပါ၊ နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်အနေနှင့် Singapore မှာ အိမ်ခြံမြေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ဆရာ့ရဲ့ personal opinion ကိုလည်းတင်ပြပေးစေလိုပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊